China Emeputa nke Disassemble Dispersion igwekota, Disassemble Kneading Machines, Roba Disassemble Disasion Mixer
Nkọwa:Disassemble Diserion Mixer,Machines na-akụghasị,Roba Disassemble Dispersion Mixerer,Igwe anaghị atụ ụkọ,,
Home > Ngwaahịa > Mgbasa Gburugburu > Disassemble Kneader
Ngwaahịa nke Disassemble Kneader , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Disassemble Diserion Mixer , Machines na-akụghasị suppliers / factory, wholesale high-quality products of Roba Disassemble Dispersion Mixerer R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
NBR Kneader Machine 110L  Kpọtụrụ ugbu a
Disassemble Ime igwekota maka Pọdiọk Metallurgy  Kpọtụrụ ugbu a
5 Liters CIM / PIM gbasara mgbasa  Kpọtụrụ ugbu a
3 Liters CIM / MIM gbasara mgbasa  Kpọtụrụ ugbu a
2 Liters Precise Control Disassemble Kneader  Kpọtụrụ ugbu a
1 Liter Precise Control Disassemble Kneader  Kpọtụrụ ugbu a
0,5 Liters Precise Control Disassemble Kneader  Kpọtụrụ ugbu a
0.3 Liters Nkewapụ Typedị Mgbasa Ọkpụkpọ  Kpọtụrụ ugbu a
0.2 Liters Easy nhicha ụdị agbasasị Kneader  Kpọtụrụ ugbu a
Disassemble Dispersion Kneader for Creemic metal  Kpọtụrụ ugbu a
Interdị bdị Banbury Mixer dị mma maka ịgwakọta ọtụtụ roba na ihe plastik. Rodị rotor dị iche iche nwere ike imeju ihe dịgasị iche site na usoro ihe. Igwe mmuta Banbury na Intermeshing Typedị Rotor nwere ike ịmepụta ma gwakọta roba, plastik,...
Ngwunye LINA bụ ụlọ ọrụ mbụ na-akwụ ụgwọ wee rụọ ọrụ na MIM na ụlọ ọrụ CIM nke China ma nwee teknụzụ dị elu nke Mkepe na Ceramic Powders Dispersion Kneader . LINA 1L Mini Internal Mixer bụ nke a ma ama na ọrụ eletriki eletriki na ceramik. N’agba...
Igwe igwe LINA bu otu n’ime ndi izizi izizi banyere ahia na ire nke Rubber Dispersion Kneader Mixer . NBR (Nitrile Butadiene Rubber) bụ ihe ndị a na-eji rọba mee bụ nke a pịrị apị na agwakọta na XSN-110 Liters Kneader Mixer . A na-etinye X (S) N-110...
Disassemble Ime igwekota maka Pọdiọk Metallurgy
LINA 10 Liters Disassemble Disasion Kneader for Powder Metallurgy 10 Liters Easy-nhicha Disdị Mgbasa Kneader na Iche Ọrụ na Nchịkwa Nhazi dị mma maka mmepụta CIM na MIM. Ezubere igwe mmịnye akara LINA maka Powder Metallurgy bụ maka PM (Powder...
LINA 5 Liters CIM / PIM gbasara mgbasa gbawara LINA 5 Liters Disassemble Disasion Kneader with Easy Easy-Up Function na Precise Control dị mma maka usoro CIM na MIM. Ezupụtara igwe mmesara igwe mmịnye LINA maka Powder Metallurgy bụ maka ụlọ ọrụ CIM...
LINA 3 Liters CIM / PIM gbasara mgbasa gbawara LINA 3 Liters Nkewapụ Keshin na Mkpochapu Nrụpụta Dị Mfe na Nchịkwa Precise dabara adaba maka ihe eji eme ntụ ntụ dịka seramiiki na ụbụrụ. Ezubere igwe mmịnye akara LINA maka Powder Metallurgy bụ maka...
LINA 2 Liters Njikọ Ọgbụgba Ederede Liters 2 Liters na-ekewapụ Knaader na arụ ọrụ nhicha dị mfe na njikwa precise kwesịrị ekwesị maka ihe eji eme ntụ ntụ dịka seramiiki na ụbụrụ. Ezubere igwe mmịnye nke LINA maka Powder Metallurgy bụ maka ụlọ ọrụ...
LINA 1 Liter Precise Control Disassemble Kneader 1 Liter Disassemble Dispersion Kneader maka Mfe Dị Mfe na Nchịkwa Precise dabara adaba maka ihe eji eme ntụ ntụ dịka seramiiki na ụbụrụ. Ezubere Ngwakọta Ngwakọta LINA maka Ceramic na Mental Powders...
0,5 Liters Precise Control Disassemble Kneader
LINA Obere Ngwunye Ngwakọta maka Ceramic powder Ọkpụkpụ 0,5 Liters na-agbasa maka Kachasị mfe wee dị mma maka ihe nnyapade dị iche iche dịka seramiiki na ero ntụ. Ahịa LINA na- agbasa igwe igwekota maka igwe onyonyo na ntụ ntụ nwere ike hichaa ihe...
0.3 Liters Nkewapụ Typedị Mgbasa Ọkpụkpọ
LINA 0.3 Liters Na-ekewa Typedị persdị Na-eme Mgbasa 0.3 Liters Disassemble Dispersion Mixerer kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ihe dị iche iche maka seramiiki na iche echiche. Ngwakọta ntụ ntụ nke LINA na - agbasa ntụ ntụ maka Ceramic na Isi nwere ike...
0.2 Liters Easy nhicha ụdị agbasasị Kneader
LINA 0.2 Liters Dị Mfe Mfe Typedị persdị Mgbasa LINA 0.2 Liters Disassemble Dispersion Mixererer dabara adaba maka ọtụtụ ụdị maka seramiiki na iche echiche. Ngwakọta nke Igwe Igwe Ngwunye Igwe nke Ceramic na Mental Powders nwere ike ihicha ihe ndị...
Disassemble Dispersion Kneader for Creemic metal
0.1 Liter Disassemble Disasionble Diskion Kneader LINA 0.1 lita na-asachasị ahịhịa na-ekpocha ahịhịa dị mma maka ọtụtụ seramiiki na ọgụgụ isi. Ngwakọta nke Igwe Igwe Ngwunye Igwe nke Ceramic na Mental Powders nwere ike ihicha ihe ndị ahụ na-enweghị...
China Disassemble Kneader Ngwa
Usoro mgbasa ozi gbasara LINA na-agbasa
Igwe na- ekesa ahịhịa agbasa LINA na-enye ezigbo nhicha nhicha kachasị maka ihe nnyapade. Na-enweghị emetụta nsonaazụ nke ihe na-agbanye gburugburu, a pụrụ ikewapụ onye rotor n'ụzọ dị mfe site na thegwakọta ụlọ. Typedị a na-etinye mkpokọta ihe dị n'ime, dị mma maka ọtụtụ ihe dị iche iche ma nwee ike ịnye akara uzuzu arụmọrụ kachasị mma maka igbochi nsị nke ihe.
Ihe osise pụrụ iche maka CIM & MIM
1. cleandị ọcha kachasị elu: hichaa ihe na-enweghị nkuku nwụrụ anwụ; ụlọ chagwakọta na rotors nke dispersion kneads nwere ike ịdị iche iche d kpamkpam; Ala niile nke metụrụ ihe ahụ aka bụ enyo enyo, nke na-ahụ maka ihe niile dị mfe ihicha na-enweghị ihe mkpuchi .
2. Wevable n'ime oghere: dị mkpa nchara alloy ọhụrụ a na-anabatakwa usoro ikuku ikpo ọkụ. Mgbalị siri ike na -eguzogide ihu, nbibi nke ikuku na-ada ada, na-eguzogide corrosion na ihe mgbaze dị elu.
3. kemeghi rotor ọsọ ruru: A na-agbanwe ike ngwa ngwa nke ndị rotors, nke na-elekwasị anya na ụfọdụ ihe achọrọ ọrụ ụfọdụ chọrọ ma mepụta nsonaazụ kachasị mma na arụmọrụ. Ihe akụrụngwa nke nwere akụkụ ọsọ ọsọ nke igwe eji agba gburugburu nwere ahaziri nke ukwuu maka ihe ndị ahụ nwere mmetụta ngbomoku / oke chọrọ mgbanwe okpomọkụ / ngwa ngwa ngbanwe nke okpomoku / ọsọ na ịgbatị mkpụrụ ndụ ihe dị iche.
4. okpomọkụ akara usoro: A ọtụtụ ọnwụnwa na-akọ na ogbo okpomọkụ akara nwere mkpa mmetụta nke ceramics` agba dị iche.
5. Usoro njikwa ọgụgụ isi PLC: 1. Ejiri data ndekọ ezigbo oge na mbupụ nke oge ikpere, ọnọdụ okpomọkụ (agwakọta ụlọ na n'ihu / n'azụ rotors), mgbali ebule, ugbu a, iyi iyi na koodu ntinye. 2. Enwere ike ịhazi usoro nchịkwa ruo ngwakọta agwakọta 20, chekwaa oghere uzommeputa 20. 3. Igwe njikwa nwere ikike ibubata usoro ntụrụndụ na nlekota data, wee soro MES na-ekwurịta okwu site na interface nkwukọrịta Ethernet. 4. Edebere usoro nkwukọrịta Ethernet na 20% nke akara nchịkwa echekwara. Enyere ihuenyo mmetụ aka.
Nkọwapụta nke LINA Mgbasa Okwu Mgbasa
Disassemble Diserion Mixer Machines na-akụghasị Roba Disassemble Dispersion Mixerer Igwe anaghị atụ ụkọ Disassemble Dispersion Mixer